I-Semalt ichaza i-E-Commerce Trends Regional Development Trends
Izwe le-e-commerce liye labhekana nokukhuliswa okukhulu, ngakho wonke umuntu ukholelwaukuthi ukuqedwa kwezitolo zendabuko nezitini, ezitholakala eYurophu nase-United States, kusondele kakhulu. Naphezu kwalokho e-commerceukuphakama kulindeleke emhlabeni wonke, i-e-commerce esifundeni sase-Asia Pacific izobhekana nokukhula okungavamile.
I-e-commerce emkhakheni wokungena emngceleni uyokhipha ukusebenza kwekhayaizinga lokukhulisa ngamaphesenti angu-17 uma iminyaka embalwa ezayo izinga lokukhulisa kulindeleke ukuthi libe ngamaphesenti angu-12. Uchwepheshe we i-Semalt Izinkonzo Zedivolumu, Igor Gamanenko uchaza ukuthi insimu ye-e-commerce ikhula kanjani ezindaweni ezihlukahlukene - rtg bonus codes.
Izizathu Okwenyuka Ibhizinisi Lama-inthanethi
I-logistics ye-intanethi ikusiza ukuba wenze ibhizinisi online, okwenza kube lula kakhulu.Kunezindlela eziningi zokukhokha ezinokwethenjelwa ezivumela ukushintshaniswa okuphephile kwemikhiqizo kanye. Ngaphezu kwalokho, ukungena kwe-Smartphones kubo bonkeamazwekazi enza kube lula ukutholakala kwezinsizakalo ze-intanethi emazweni asathuthukile nalawo athuthukayo, kanti i-SEO isibe ithuluzi le-ukukhula kwe-inthanethi kwamabhizinisi.
Ngomnotho okhulayo wezinga eliphakathi kwezwekazi lase-Asia, lapho abantu banalo khonaizinga eliphansi lokwaneliseka ngemikhiqizo yabo yasekhaya, i-e-commerce izoshaya ukuthengiswa kwemali ka-$ 627 billion ngonyaka ka-2022. Iningi lezohwebo ze-e-commerce livukelaezungeze imikhiqizo engakhiwanga endaweni, ngakho lapha i-China ithatha isabelo sebhubesi emakethe ye-intanethi.
Ukuthengwa Kwemingcele Yomgwaqo E-China
Ngenxa ye-SEO, ukuthengiswa kwe-intanethi kuzokwenza ngcono kulo nyaka. I-China izohola umngcele ongemuvaibhizinisi eliku-intanethi, lifinyelela kwabathengisi be-inthanethi abayizigidi ezingu-200 ngo-2020 ngemali edayiswa ku-$ 245 billion ngokusho kwe-Accenture..Kanyelokhu, ukuphikisana phakathi kuka-Alibaba wase-China ne-US ka-Amazon emakethe yaseShayina kuthuthukisa ukwamukelwa kwemikhuba emihle ngamabhizinisi ase-intanethi.
Inhlanganisela yokuwina iqukethe izinto ezifana nokukhokhwa kwezidingoizindleko zomkhiqizo, ukuphathwa kokuhambisana nokulawula, kanye nokuziphatha okucabangelayo kwe-SEO. Mayelana nokukhokha, izitolo zase-China ezise-inthanethi zinikeza inkokhelo eminingiizindlela eziphephile futhi ezinokwethenjelwa. Amapulatifomu afana ne-Alipay (Alibaba) kanye ne-Tencent (WeChat) asungule isimiso esihle esamukela izinkokheloKusuka kunoma iliphi izwe.
Ukuthengwa Kwemingcele Yomgwaqo Kwezinye Izifunda
Ngokusho kocwaningo oluqhutshwa yi-KPMG eMpumalanga Ephakathi nasezindaweni zase-Afrika, isi-ArabhuI-Afrika ibona ukwazisa okukhulu kokuhweba okungahambisani nemingcele ye-intanethi. Isibonelo, inguqulo yeMpumalanga Ephakathi ye-Amazon - Souq- ukwandisa ukuthengiswa kwe-intanethi esifundeni kuya ezintweni ezingaphezu kwezigidi eziyi-8 ekuqaleni kuka-2017 kuphela.
Ukubuyiselwa kwemingcele ye-cross-border
Imbuyiselo yeMikhiqizo ibiza kakhulu ngokweminyaka ka-American's Federal Express Yearumbiko ka-2016. Namuhla, amakhasimende angathola imali yokuthenga ngokubiza kuze kube iphesenti elithile ngamasevisi we-PayPal.
I-Cross-Border Sales eMelika
Ucwaningo, oluphethwe amafemu ocwaningi ahlukahlukene, lubonisa ukuthi ukuthengiswa kwemingcele e-USinani ngamaphesenti angaba ngu-36 webhizinisi le-intanethi yezwe. Ngaphezu kwengxenye yawo konke ukuthengiswa kwe-inthanethi kudlula ezindaweni ezimakethe njenge-eBay futhiI-Amazon, ngenkathi abangaphezu kwesigamu sabathengisi abangena emngceleni abasebenzisa i-USD njengemali ethembekile kakhulu. Kule nqubo, i-SEO idlala ngokuphawulekayoindima ekuthuthukiseni ubukhona be-intanethi yabathengisi.
Ukukhula kwempahla emakethe ye-intanethi kuyinkqubo ehilela ukubuka kanyeukuqaliswa kwemikhuba emihle ngenkathi kuqhubeka izinyathelo ezikhona. Akumangalisi ukuthi izinsizakalo zokuthutha ezisebenzayo ziye zaba yiyonaokunye okusetshenziselwa izindlela zendabuko zokuthunyelwa ngenkathi usebenzisa i-SEO kuvumela ukweba khona kokuqina kwezwe jikelele. Ngakho-ke, cabanga kokubili nendawoukufunwa kwemingcele kanye nezidingo, umthethonqubo wenkambiso uhlinzekela ukuhlelwa kwemakethe efanele.